သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု နာမည်ကြီးတီထွင်မှု
ကြေးနန်းကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်အခါအချိန်စမတ် newspapermen အာရုံကိုပေးဆောင်။ The New York သံတော်ဆင့်, နေမင်းနှင့် Tribune, မကြာသေးမီကတည်ထောင်ခဲ့သည်ခဲ့သညျ။ ဤအသတင်းစာများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေးနန်းအလှနျအားလုံးသတင်းစာများကိုထိခိုက်ဖို့ခညျြနှောငျခဲ့ကွောငျးကိုမြင်တော်မူ၏။ ဘယ်လိုသတင်းစာများအခွအေနနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ကြွလာတော်နှင့်ဝါယာကြိုးများကျော်ပိုပြီးနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ရှိသနည်း
တဦးတည်းအရာအဘို့, သတင်းစာများ ယခုပိုကောင်းပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့-powered America မှာပုံနှိပ်ခြင်းစတင်နေပြီခဲ့သည်။ နယူးပုံနှိပျအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာရောဘတ်ဟိုးနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည် ရှမွေလသည် Morse က ကြေးနန်းစုံလင်ဖို့ရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ ရေနွေးငွေ့ပါဝါမီ, United States မှာပုံနှိပ်သတင်းစာများလက်ဖြင့် operated ပုံနှိပျကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ The New York Sun က, စျေးပေါခေတ်သစ်သတင်းစာများများ၏ရှေ့ဆောင်, 1833 ခုနှစ်တွင်လက်ဖြင့်ပုံနှိပ်နှင့်လေးရာစာတမ်းများတစ်နာရီတဦးတည်းစာနယ်ဇင်းများ၏အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းခဲ့ပါတယ်။
ရောဘတ်ဟိုးရဲ့ကို double-ဆလင်ဒါ, ရေနွေးငွေ့-မောင်းနှင် ပုံနှိပ်စာနယ်ဇင်း တိုးတက်မှုခဲ့သည်သို့သော်ထိုသို့ခေတ်သစ်သတင်းစာသတင်းစာကိုတီထွင်သည်ဟုဟိုးရဲ့သားခဲ့သညျ။ 1845 ခုနှစ်တွင်ရစ်ချတ်မတ်လဟိုးတရာတထောင်မိတ္တူတစ်နာရီ၏နှုန်းထားများမှာသတင်းစာများပုံနှိပ်ခွင့်အတွက် Revolving သို့မဟုတ် rotary စာနယ်ဇင်းတီထွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအစာရှောင်ဟိုးပုံနှိပျ, စျေးပေါစက္ကူခဲ့, ယခုစက်ပစ္စည်းများကန့်ပစ် TYPE နိုင်သတင်းစာကြေညာသူ, ပုံစံနှင့်သစ်သားပေါ်ထွင်းထုအစားထိုး photoengraving ခြင်းဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုအောင်၏ဖြစ်စဉ်သစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် 1885 ၏သတင်းစာများ, ဆဲဗင်ျယာမိ Franklin အဆိုပါ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြန်တမ်းများအတွက်အမျိုးအစားကို set up ဖို့အသုံးပြုကြောင်းတူညီတဲ့နည်းလမ်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ type ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာစီမတ်တပ်ရပ်သို့မဟုတ်သူ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ "မိတ္တူ" နဲ့သူ့ရဲ့ "အမှု" မှာထိုင်လျက်, သူသည်ပြည့်နှက်များနှင့်မှန်ကန်စွာတစ်လိုင်းလှပတဲ့မှီတိုင်အောင်စာအားဖြင့်စာတစ်စောင်အမျိုးအစားကိုတက်ခူး။
ထို့နောက်သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏လက်နှင့်, ဒါပေါ်မှာအခြားလိုင်းမှာ ထား. , ပေသည်။ အလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်ပြီးနောက်, အမျိုးအစား, နောက်တဖန်ဖြန့်ဝေခံရဖို့စာအားဖြင့်စာတစ်စောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ခြင်း, စာစီနှေးကွေးခြင်းနှင့်စျေးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
Linotype နှင့် Monotype
လက်စွဲလုပ်ခြင်း, စာစီဒီအလုပ်သမားနှစ်ဦးကိုအနုစိတ်နှင့်ပညာသားပါစက်တွေ၏တီထွင်မှုများကကှယျပြောကျသှားခဲ့သည်။ တီထွင်အဆိုပါ linotype, Ottmar Mergenthaler Baltimore ၏, နှင့် Tolbert Lanston, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၏ဇာတိ၏ monotype ။ သို့သော် linotype သတင်းစာများအဘို့အစက်ရေးသားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဲဖရက် Ely သဲသောင်ပြင်အဖြစ်အစောပိုင်း 1847 အဖြစ်လက်နှိပ်စက်တစ်မျိုးကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမဲ့သူကတခြားအရာများအတွက်ကြောင့်လျစ်လျူရှု။ မိမိအလက်နှိပ်စက်သို့သော်ထိုသို့အမျိုးအစားများကို inking တစ်ကျေနပ်နည်းလမ်းခေတ်သစ်လက်နှိပ်စက်၏ features တွေအများအပြားရှိကြလေသည်။ 1857 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်၏အနောက်တောင်ဘက်တွင် Francis ကမှင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်ခဲ့တဲ့ဖဲကြိုးနဲ့လက်နှိပ်စက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအစာစီလုပ်ငန်းတွေမစီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုရှိကြ၏။ သူတို့ကအကြံပိုင်ယောက်ျား၏ကစားစရာအဖြစ်မျှသာမှတ်ယူခဲ့ကြသည်။
ခရစ္စတိုဖာ Latham Sholes
အဆိုပါလက်နှိပ်စက်များ၏အသိအမှတ်ပြုဖခင် Wisconsin ပြည်နယ် newspaperman, ခရစ္စတိုဖာ Latham Sholes ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအပရင်တာသပိတ်သှားပွီးနောကျ, Sholes တစ်လုပ်ခြင်း, စာစီစက်တီထွင်အနည်းငယ်မအောင်မြင်ကြိုးစားမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့နောက်သူသည်အခြားပရင်တာ, ရှမွေလသည် Soul နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. တစ်ဦးစာရငျးစက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမိတ်ဆွေကားလို့စ် Glidden ဒီအကြံပိုင် device ကိုမြင်သူတို့အက္ခရာများ print ထုတ်မယ့်စက်ကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစားသင့်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါလူသုံးယောက်, Sholes, Soul နှင့် Glidden ထိုကဲ့သို့သောစက်တီထွင်ရန်ကြိုးစားသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှယခင်စမ်းသပ်များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်အရာများစွာကိုအမှားများကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သို့သော်တီထွင်မှုပုံစံ ယူ. တီထွင်သူသို့သော်သူတို့၏လက်နှိပ်စက်ကိုအလွယ်တကူကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့်အမှားများကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် 1868. ၏ဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများတွင်မူပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဂျိမ်းစ် Densmore Soul နှင့် Glidden ထွက်ဝယ်ယူစက်များတွင်ရှယ်ယာဝယ်ယူခဲ့သည်။ Densmore ရှေ့ထက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းဆက်ခံအတွက်သုံးဆယ်ခန့်မော်ဒယ်များစီတည်ဆောက်ဖို့ရန်ပုံငွေရာနှစ်ဆယ်ကို။
အဆိုပါတိုးတက်စက် 1871 ခုနှစ်တွင်မူပိုင်ခွင့်, နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသူတို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရခဲ့သည်။
Sholes Remington ဖို့လက်နှိပ်စက်ကမ်းလှမ်း
1873 ခုနှစ်တွင်ဂျိမ်းစ် Densmore နဲ့ Christopher Sholes, Eliphalet Remington နှင့်သားမှသေနတ်နှင့်အပ်ချုပ်စက်၏ထုတ်လုပ်သူ၎င်းတို့၏စက်ပူဇော်ကြ၏။ Remington ရဲ့ကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီးစက်စျေးဆိုင်များတွင်လက်နှိပ်စက်, စမျးသပျကိုခိုင်ခံ့စေနှင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Remingtons အဲဒီမှာလက်နှိပ်စက်များအတွက်ဝယ်လိုအားဖြစ်နှင့်တစ်ဦးစိမ်းပေါင်းလဒ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးမူပိုင်ဖြစ်စေပေးဆောင်ခြင်း, မူပိုင်ခွင့်ကိုဝယ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ Densmore အဆိုပါမူပိုင်ရှေးခယျြခဲ့ကာသန်းနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလက်ခံရရှိစဉ် Sholes, အဆင်သင့်ငွေပိုမိုနှစ်သက်နှင့်တသောင်းနှစ်ထောင်ဒေါ်လာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါကြေးနန်း, စာနယ်ဇင်း, နှင့်လက်နှိပ်စက်ရေးသားထားသောစကားလုံးများအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၏အေးဂျင့်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတယ်လီဖုန်းပြောဆိုစကားလုံးတစ်ခုအေးဂျင့်ခဲ့သည်။ အသံကမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ကဓာတ်စက် (စံချိန်တင်ကစားသမား) ဖြစ်ခဲ့သည်မျိုးပွားမှုအတွက်နောက်ထပ်တူရိယာ။ 1877 ခုနှစ်တွင်သောမတ်စ်အယ်လ်ဗာအက်ဒီဆင်သည်သူ၏ပထမဦးဆုံးဓာတ်စက်ပြီးစီးခဲ့သည်။
အဆိုပါဓာတ်စက်တစ်သတ္တုဆလင်ဒါကျော်ထားရှိသံဖြူသတ္တုပြားများ၏စာရွက်ပေါ်တွင်မိနစ် Indent ထဲသို့လူ့စကားသံကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးလေထဲမှာတုန်ခါဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်စက်ထို့နောက် Indent စေသောခဲ့သောအသံမျိုးပွားနိုင်ဘူး။ အဆိုပါစံချိန်သို့သော်အနည်းငယ်ပုံတူလိုက်ဝတ်ဆင်နှင့်အက်ဒီဆင်အကြာတွင်သည်အထိထပ်မံသည်သူ၏စိတ်ကူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လည်းအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့သညျ။ အခွားသောအမှုကိုပြု၏။
ဓာတ်စက်စက်တွေကွဲပြားခြားနားသောအမည်များကိုအမျိုးမျိုးအောက်မှာတီထွင်ခဲ့ကြသည်, သို့သော်, အားလုံးမိန့်ခွန်းသို့မဟုတ်သီချင်းအတွက်အံ့သြစရာသစ္စာနှင့်အတူလူ့စကားသံကိုပြန်ထုတ်ပေးနှင့်တစ်ခုတည်းတူရိယာသို့မဟုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးသံစုံတီးဝိုင်းဖြစ်စေ၏တန်ချိန်။
1800 ၏နောက်ဆုံးတစ်ဝက်ရာစုဓာတ်ပုံနှင့် photoengraving ၌ကြီးသောတိုးတက်လာမြင်တော်မူ၏။ ဓာတ်ပုံအတွင်းပထမဆုံးစမ်းသပ်ချက်ဥရောပ, ရှမွေလသည် Morse ကအတွင်းဖြစ်ပျက်နေချိန်တွင်သူ့မိတ်ဆွေဆရာယောဟနျ Draper မှအထူးသဖြင့်အမေရိကမှဓာတ်ပုံမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Draper ခြောက်သွေ့ပန်းကန် (ပထမဆိုးကျိုး) ၏စုံလင်ခြင်းအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ပုံတူဓာတ်ပုံလုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ကြီးမြတ်တီထွင်သူ ဓာတ်ပုံပြပွဲ နည်းပညာခဲ့ ဂျော့ခ်ျ Eastman Rochester, နယူးယောက်ကနေ။ 1888 ခုနှစ်တွင်ဂျော့ခ်ျ Eastman အရောင်းဆောင်ပုဒ်သူ Kodak ဟုခေါ်တွင်ရာအသစ်တစ်ခုကိုကင်မရာ, မိတ်ဆက်နှင့်အတူ: "သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်, ငါတို့အရာကြွင်းလေလုပ်ပါ။ " ပထမဦးဆုံးအ Kodak ကင်မရာတရာဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ကြောင်းထိခိုက်စက္ကူ (ရုပ်ရှင်) ၏လိပ်နှင့်အတူ Pre-loaded ဖြစ်ခဲ့သည်။ (ပထမမှာတစျခုလုံးကိုကင်မရာကိုစလှေတျခဲ့သညျ) ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အလွှတ်လိုက်နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးကရုပ်ရှင်လိပ်။ ယင်းဝါသနာစျေးကြီးနှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျနှစ်ဦးစလုံးအခါ Eastman တစ်ဦးအပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာခဲ့သညျ။ ခြောက်သွေ့တဲ့ပန်းကန်အောင်တဲ့နည်းလမ်းကိုတီထွင်ပြီးနောက်သူတီထွင်လိပ်ရုပ်ရှင်အရင်ကဲ့သို့အစောပိုင်း 1880 ကဲ့သို့သူတို့ကိုထုတ်လုပ်လာတယ်။
ပထမဦးဆုံး Kodak ပြီးနောက်ထိခိုက် Nitro-cellulose ရုပ်ရှင်၏လိပ်နှင့်ပြည့်စုံသည်အခြားကင်မရာများရှိလာ၏။ (ထိုဖန်ခွက်ခြောက်သွေ့တဲ့ပန်းကန်ကိုအစားထိုးသော) cellulose ရုပ်ရှင်၏တီထွင်မှုဓာတ်ပုံတော်လှန်ခြင်း။ တရားရုံးစစ်တိုက် Goodwin ရဲ့မူပိုင်ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ထောကျခံခဲ့ပြီးနောက်သိက္ခာ Hannibal Goodwin နှင့်ဂျော့ခ်ျ Eastman နှစ်ဦးစလုံး, သို့သော်, Nitro-cellulose ရုပ်ရှင်မူပိုင်ခွင့်။
အဆိုပါ Eastman Kodak ကုမ္ပဏီသည်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်စျေးကွက်အတွက်စန်းနေသူများကဖန်တီးသောအမှောင်မိုက်တဲ့အခန်း၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည့်ပထမဦးဆုံးသောရုပ်ရှင်သည့်အရာတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
Motion Pictures ရုပ်ရှင်၏မွေးဖွားခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သောမတ်စ်အယ်လ်ဗာအက်ဒီဆင် ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ အက်ဒီဆင် Philadelphia တွင်ဟင်နရီ Heyl ၏လုပ်နေတဲ့ရေနံစိမ်း system ကိုတှေ့မွငျရခဲ့သည်။ Heyl တစ်ဘီး၏လုံးပတ်မှ fixed ဖန်ပြားသုံးဦးချင်းစီပန်းကန်တစ်ဦးမှန်ဘီလူးများ၏ရှေ့မှောက်၌လှည့်။ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာဓါတ်ပုံတွေကိုဒီနည်းလမ်းကိုနှေးကွေးခြင်းနှင့်စျေးကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားအမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်တိပ်ကဲ့သို့သောချွတ်ရာတွင်အသုံးပြုခံရဖို့လိုအပ်သော Heyl ပြပွဲကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်အက်ဒီဆင်နှင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူကပထမဦးဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံကင်မရာကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်များ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ ဂျော့ခ်ျ Eastman ခေတ်သစ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံစက်မှုလုပ်ငန်းမှမွေးဖွားပေးခြင်း, သစ်ကိုတိပ်ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆိုကိုရုပ်ပုံပရိုဂျက်တာသစ်ကိုကင်မရာနှင့်ရုပ်ရှင်ဖမ်းမိသောအရာကိုပြသနိုင်ဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂလန်နှင့်ရှင်ပေါလုကဲ့သို့အခြားတီထွင်သူ, Lumiere ပြင်သစ်တွင်အချို့သောစက်မှုအသေးစိတ်ကိုအတွက်ကွဲပြားသည့်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်တွေ, တခြားအမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Motion Pictures ရုပ်ရှင်မှပြည်သူ့တုံ့ပြန်မှု
အဆိုကိုရုပ်ပုံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြသခံခဲ့ရသောအခါ, ပရိသတ်တွေအံ့သြခဲ့ကြသည်။ လူကြိုက်များသရုပ်ဆောင်များကိုအဆိုပါသို့ဇာတ်စင်ကနေပြောင်းရွေ့ "ရုပ်ရှင်။ " သေးငယ်တဲ့မြို့မှာတော့အစောပိုင်းရုပ်ရှင်ရုံမကြာခဏထားသိုခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်နှင့်မြို့များသည်အကြီးဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးရုပ်ရှင်ရုံအချို့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ကူးပြောင်းနှင့်အသစ်သောရုပ်ရှင်ရုံအထူး built ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Eastman ကုမ္ပဏီမကြာမီလစဉ်လတိုင်းရုပ်ရှင်၏အကြောင်းကိုတသောင်းမိုင်ထုတ်လုပ်သော။
အဆိုပါ piggy ဘဏ်များ၏သမိုင်း
အတ္ထုပ္ပတ္တိ: ရှမွေလသည် Slater
ရှေးဟောငျးအီဂ Times သတင်းစာကနေခေတ်သစ်နေ့မှအားကစား၏သမိုင်း,
သောမတ်စ်ဒဗလျူ Stewart က, အ Wringing ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်၏တီထွင်သူ
ဝန်ကြီးအဖွဲ့ Card ကို
အီတလီ Survival စကားစုများ - အထဲကစားသောက်ဆိုင်
အဲဒီ7သိကောင်းစရာများနှင့်အတူမာစတာရှူရှိုက်မိခြင်း
အဆိုပါ 4-2-3-1 ဖွဲ့စည်းခြင်း
Fit Test ကိုတစ် Chi-Square ကိုကောငျးမွတျခွငျး၏သာဓက
ခြေလှမ်းအတွက် Requiescat ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
အဆိုပါလေးဦး, Classical Element တွေကို
ဥရိနှင့်သုမိမျ: Mystery ရှေး္တု
2001 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Goosen များအတွက်ဒုတိယအချန့်စ
GMAT စာမေးပွဲသိကောင်းစရာ - ဆက်တိုက်နံပါတ်
'' Tener '' ၏ conjugation
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Sullivan ကကျွန်း၏တိုက်ပွဲ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: "Little က Boy" အနုမြူဗုံး
အဆိုပါ Sicarii: ပထမရာစုအကြမ်းဖက်သမားများက
ရှေးဟောငျးဂရိသမိုင်း: Cassius Dio
ပိုပျော်စရာလေ့လာ Make 8 နည်းလမ်းများ
အိမ်လုပ် crystal ဟာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေဖို့အတွက်ဘယ်လို
ဂြာမနျတွင် "Beginnen" (Begin မှ) Conjugate လုပ်နည်း
အဓိပ္ပာယ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ Pro ကို-ကြိယာ၏ဥပမာ